अब चलचित्र नै मेरी प्रेमिका – Sourya Online
अब चलचित्र नै मेरी प्रेमिका
सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ९ गते २:४० मा प्रकाशित
बाल्यकालमा म अलि चन्चले थिएँ । अरू साथीभन्दा भिन्न स्वभावको मानिन्थेँ । हिँड्न, बोल्न र केही बुझ्न सक्ने उमेरमा पुगेपछि समवयीहरूको लहरमा मिसिएर म पनि स्कुल पुगेँ । उति बेला स्कुलमा कमै केटीहरू पढ्थे । किशोरावस्थाअघिका ती दिनमा विपरीतलिंगीय आकर्षण र प्रेमका कुरा सोचाइमै आउँदैनथे । कक्षा उक्लने क्रमसँगै किशोरावस्था पनि आयो । स्कुलमा केटीसाथीहरू केही मात्रै थिए । तर, त्यो बेलाको सामाजिक मान्यता अहिलेभन्दा निकै कडा थियो । कसैलाई आँखा लगाउने वा प्रेमका नजरले हेर्ने साहस गरिएन । अथवा भनौँ, सोच्दा पनि सोचिएन । कुनै केटीसँग हिँड्नु त के, बोल्दा पनि समाज छड्के नजर लगाइहाल्थ्यो ।
हुन त समाजको त्यो पहरेदारीका केही सकारात्मक पक्ष पनि थिए । उति बेलाको मायाप्रेममा अहिलेजस्तो विकृति थिएन । अनि प्रेम गर्नु आफैँमा ठूलो साहसजस्तो थियो । यसैकारण स्कुले जीवनमा मेरो कसैसँग लभ परेन । फेरि त्यतिबेला व्यक्तिले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सम्मानजनक थियो । प्रेमका नाममा अहिलेजस्तो उच्छृंखल गतिविधि थिएन । हुन त मेरा केही साथी समाजको परिधि नाघेर स्वार्थी माया गाँसिरहेका हुन्थे । मैले चाहिँ त्यस्तो चक्करमा फस्ने सोच कहिल्यै बनाइनँ ।
कक्षामा केटा एकातिर हुन्थे, केटीहरू अर्कोपट्टि । सीधा नजरले केटीहरूतिर हेर्न पनि डर लाग्ने । केटीहरू पनि अहिलेजस्तो उच्छृंखल कहाँ थिए र ? त्यस बेलाको टोल आफैँमा परिवारजस्तो हुन्थ्यो । गाउँभरिका मान्छे बडाबाउ, काकाकाकी, नानादाजै भनेर पुकारिन्थे । उनीहरूको मानमनितो राखिन्थ्यो । अहिलेजस्तो कसैको वास्तै नगरी दिउँसै हात बाँधेर केटाकेटी किस गर्दै हिँड्ने चलन थिएन । पूरै गाउँ घरजस्तो हुन्थ्यो, अनि गाउँका मानिस परिवारका सदस्य । गाउँभित्र कसैको प्रेमप्रसंग सुनिनुले राम्रो अर्थ राख्दैनथ्यो ।
यसो भन्दैमा प्रेमभावना नै उत्पन्न नहुने त कहाँ हो र ? यत्ति हो ती भावनाहरूलाई समाजको मर्यादा उल्लंघन हुने गरी कार्यान्वयनचाहिँ गरिएन । मेरा प्रेमभावहरू सरल किसिमका छन् । म आफ्ना चलचित्रहरूमा पनि त्यस्तै भावना व्यक्त गराइरहेको हुन्छु । जस्तै– प्रेममा पवित्रता जरुरी छ । आर्टिफिसियल प्रेममा प्रेमीप्रेमिकाले जुनको ज्योति टिपेर ल्याइदिन्छु भन्छन् रे † तर त्यसलाई प्रेम नभएर घृणाका रूपमा विश्लेषण गर्छु म । म त प्रेममा सरलता, सौम्यता र यथार्थ मन पराउँछु । जस्तो मेरै चलचित्रको गीत–
जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म,
सागरको मोती ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म,
म त सक्ने कुरा गर्छु, भन तिम्रै लागि मर्छु,।’
वास्तविक जोडीहरूको प्रेम यस्तै साँचो अनि सत्य हुन्छ । जहाँ प्रेमीप्रेमिकाले एकअर्कोलाई मात्र देख्छन् । एकअर्कोमा आत्मादेखि समर्पित हुन्छन्, आपसी अस्तित्वमा विलय हुन्छन् । मेरो यही भावना चलचित्रमा गीत बनेर पोखिएको छ–
तिमीलाई मात्र देख्छ मेरो दृष्टि,
तिमी छ्यौ र छ नि आकाश धर्ती…।
यसखाले भावना अन्तरंगबाट उत्पन्न भएकाहरू साँच्चै वास्तविक प्रेममा डुबेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहँदैन । त्यो समर्पण आत्मीयताको चरमविन्दुमा पुग्दा उनीहरूका भावना मैले चलचित्र ‘रिदममा’ राखेको यो गीतका शब्दजस्तै हुन्छन् :
पागल म बन्न सक्छु, सक्दिनँ तिमीलाई भुल्न
म मृत्यु रोज्न सक्छु, सक्दिनँ अरू रोज्न ।
म आफ्ना चलचित्रमा प्रेमका नाममा कुनै पनि खाले उच्छृंखलता पस्किन्नँ । तर, अहिले माया सस्तो विषयवस्तु बन्न थालेको छ । दुई रातको प्रेमलाई वास्तविक प्रेमको परिभाषाभित्र जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको पाइन्छ । म आफ्ना चलचित्रलाई चाहिँ सकेसम्म यस्ता विकृतिबाट जोगाउँछु । त्यसैले म गीतमा पनि अश्लीलता होइन, शालीन सौन्दर्य र शृंगारिकतालाई प्रश्रय दिन्छु । माथिका गीतहरू मेरै भावनामा लेखाइएका हुन् ।
अहिलेको जमानाको माया यति कमजारे हुँदो रहेछ कि ओइलाउन एकक्षण पनि नलाग्ने । जबकि कोमलभन्दा कोमल फूल ओइलाउन पनि २४ घन्टा त कम्तीमा लाग्छ । फूलभन्दा चाँडो ओइलाउने सम्बन्ध पनि कतै माया हुन्छ ? त्यो त स्वार्थ नै हो पक्कै । नत्र त आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुन सक्ला, रूपमा माया पनि केही परिवर्तित देखिएला । तर, त्यसको सारगत पवित्रता कहिल्यै बदलिन सक्दैन ।
यस्तै शालीन भावनाहरू बढी भएकाले हो कि के हो, मचाहिँ बिहेका मामिलामा अलि ढिलै भएछु । आजभन्दा ७ वर्षअघि ४३–४४ वर्षको उमेरमा मेरो बिहे भयो । परिवारले मागिदिएकी केटी । नाम कविता । सामाजिक रीतिअनुरूप नै उनको सिउँदोमा सिन्दूर हालेँ । दुवैतिरका परिवारको उमंग र उत्साहबीच हामी वैदिक रूपमा एक भयौँ । तर, यो सम्बन्ध लामो समय रहन पाएन, करिब ६ महिनामै हाम्रो डिभोर्स भइहाल्यो । डिभोर्सको मुख्य कारण विचार नमिल्नु रहेछ । वैवाहिक सम्बन्धको रथले लामो यात्रा कायम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणै वैचारिक बेमेल रहेको मैले बुझेँ । सम्बन्धित व्यक्तिका विचार अनि स्वभावहरू आफ्ना लागि जीवनपर्यन्त हुने खालका छन्/छैनन् भन्ने नबुझी गरिएको बिहे त केवल परिबन्ध मात्रै रहेछ । त्यसैले म मेरो जिन्दगीको दोष अरू कसैमाथि थोपर्न चाहन्नँ ।
वास्तवमै उखान सही रहेछ– भावीले छैटीमा लेखिदिएको भन्दा बढी पाइँदैन । मेरो हकमा चाहिँ ‘तेरो बिहे हुँदैहुँदैन, भए पनि सफल हुँदैन’ भनेर लेखिदिएको रहेछ क्यारे । सायद म भावीको लेखाविपरीत गएँ, त्यसैले उनीसँगको सम्बन्ध सोचेजस्तो भएन । देख्न सकिने स्पष्ट कारण खासै केही थिएन । सायद हामी दुवैलाई थुप्रै कुराको आ–आफ्नै खाले अभाव थियो । कसैको १४–१५ वर्षको उमेरमै विवाह हुन्छ, कसैको ३०–३५ वर्षमा । म अलि लेट नै भएको थिएँ । यसको कारण पनि म लेखान्तलाई नै मान्छु । त्यसैले त कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ । अहिले लाग्छ– मेरो वास्तविक प्रेमिका कुनै मानवशरीर होइन, चलचित्र क्षेत्र रहेछ । छैटीले नै ‘तैँले चलचित्रक्षेत्रलाई नै आफ्नी प्रेमिका मान्नु, उसैलाई माया गर्नु भनेर लेखिदिएको रहेछ । विवाह टुटेपछि यो कुरा झन् राम्ररी बुझेको छु । अब यही प्रेमिकासँग रमाउँदै म जीवन बिताउन चाहन्छु । र, यो प्रेमिकाको मायामा चुर्लुम्म डुबिसकेको पनि छु । यसैले मलाई बचाएको छ । यही मायामा हराइरहेको छु ।
डिभोर्सपछि मैले बनाएका ‘नाइँ नभन्नु ल,’ ‘म तिम्रो भइसकेँ’ र ‘रिदम’ सम्म आइपुग्दा म व्यक्तिप्रेमबाट धेरैमाथि राष्ट्रप्रेमसम्म आइपुगेको छु । मायाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । म चलचित्रक्षेत्रको मायामा यसरी डुबेको छु कि अरू कुनै परीको आवश्यकताबोध भएको छैन । विगतका पल त अब अतीत भइसके । विगतकी प्रेमिका सम्झिए अहिलेकी मेरी चलचित्र–प्रेमिका रिसाउलिन् । फेरि उनीप्रतिको माया कम होला कि भनेर डर पनि लाग्छ । विगतको माया सम्झिएर बिलौना गरे वर्तमानको मायालाई अन्याय गरेको ठहरिन्छ । यो मायामा यसरी फसेको छु, पागल प्रेमी नै भइसकेँ । यो सम्बन्ध कसैले टुटाउन सक्दैन ।
आफ्नो अनुभव मात्र नभएर आक्रोश, मायाप्रेम, दया, सद्भाव, राष्ट्रियता, समाजिकता सबै कुरा चलचित्रमै पोख्छु । उसैसँग सेयर गर्छु । किनकि उसँग मेरो भावना मिल्छ । जोसँग मन मिल्छ, उसैसँग जीवन बिताइन्छ । नकारात्मक पक्षलाई पनि सकारात्मक किसिमले हेर्नुपर्छ । बितेका हरेक पलबाट सकारात्मक कुरा टिपेर राखिरहेको हुन्छु म । छोटो वैवाहिक जीवनले पनि मलाई थुप्रै सकारात्मक अनुभूतिहरू दिएको छु । कवितासँग बिताएका सबै पल मेरा लागि ज्ञानको ज्योति हुन् । मलाई आजको सफलता देखाउन ती पलहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।